Nahazo ny Fankatoavan’ny Firenena Mikambana Ny Fivavahana Amin’ny Renin’Andriamanibavy Vietnamiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2017 4:29 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Français, polski, Español, English
Mpivavaka, Kim Chi manatontosa ny fomba lên đồng ho an'ny delegasionan'ny tempoliny ao anaty sambo nandritra ny fetibe Điện Hòn Chénl. Loa / Jenny Lý
Ity lahatsoratr’i Jenny Lý ity dia avy amin'ny Loa, tranonkalam-baovao tsy miankina sy fandraketam-peo mandefa ireo tantara momba an'i Vietnam. Navoakan'ny Global Voices indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nahazo fankatoavana avy amin'ny UNESCO ho “vakoky ny zanak'olombelona tsy voatsapan-tanana” ny fivavahana amin'ny Renin'Andriamanibavy ao Vietnam.
Nataon'ny Komity Iraisampanjakana ao amin'ny Firenena Mikambana ny fanambarana ofisialy nandritra ny Fifanarahana faha-11 ho Fiarovana ny Vakoka tsy voatsapan-tanana tany Addis-Abeba, Etiopia, nanomboka ny 28 Novambra ka hatramin'ny 2 Desambra 2016.
Niteraka fankalazana tao Vietnam ny vaovao, indrindra teo amin'ireo fiarahamonina mivavaka amin'ny razana sy ny manam-pahaizana efa nandany taona maro tamin'ny fitadiavana ny fankatoavan'ny UNESCO. Efa nametraka dosie i Viet Nam tany am-boalohany tamin'ny taona 2015 momba ny “fomba mifandraika amin'ny finoan'ny Viet ny Renin'Andriamanibavin'ny Tontolom-Panjakana Telo”, saingy nahemotra ho hatramin'ity taona ity ny fankatoavana.
Ny fivavahana amin'ny Renin'Andriamanibavy ao Vietnam dia mampiseho ny vakoka Vietnamiana sy ny filàna ara-panahin'ny olona ho fanomezam-boninahitra ny razamben'izy ireo hiarovana fiainana zina. Maneho fitiavana amam-pinoana ny maha-renim-pianakaviana, izay taratry ny rafitra entim-behivavy ny tao Vietnam ity fomba amam-panao ity.
Nilaza ny UNESCO fa ” manome fototra amin'ny fifandraisana ara-tsosialin'ireo mpikambana mandray anjara ao amin'ny vondrom-piarahamonina” ilay finoana. Ny fivavahana amin'ny Renin'Andriamanibavy ihany koa dia manampy amin'ny “fankasitrahana ny vehivavy sy ny andraikiny eo anivon'ny fiarahamonina”.
Fanompoam-pivavahan'ny delegasionan'ny tempoly ao Huế nandritra ny fetibe Điện Hòn Chén tamin'ny Aogositra 2016. Loa / Jenny Ly
Ny Renin'Andriamanibavin'ny Fanjakana telo dia misolo tena ireo andriamanitra avy any an-danitra, avy amin'ny rano, ny tendrombohitra sy ny ala, ary nampifandraisina amin'ny olo-malaza tena izy sy ireo nolazain'ny angano.
Iray amin'ireo fanao lehibe amin'ny fivavahana amin'ny Renin'Andriamanibavy ny fomba ara-pivavahana lên đồng, fomba idiran'ny mpanatontosa ny fomba ao amin'ny tromba ka iantsorohany ny fomban'andriamanitra iray ao anaty fitafiana sy andihizany ho fanomezam-boninahitra ny Renin'Andriamanibavy. Tontosaina isan'andro amin'ny lanonana eny ifotony izany fomba amam-panao izany, sy mandritra ny fetibe goavana sy ny fanaovana fivahiniana masina mandritra ny taona.
Manana vakoka tsy voakasi-tanana 10 hafa ankatoavin'ny UNESCO ihany koa i Vietnam, anisan'izany ny fombam-pivavahana Tugging (2015), ny fivavahana amin'ny mpanjaka Hùng ao Phú Thọ (2012) ary ny hiram-bahoaka Quan Họ Bắc Ninh (2009).
Fantaro bebe kokoa ny momba ny fivavahana amin'ny Renin'Andriamanibavy amin'ny fihainoana ity raki-peo eto ambany ity